आज मिति २०७८ साल साउन २२ गते शुक्रबार, अगष्ट ६ तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
शुक्रबार, २२ श्रावन २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । आज मिति २०७८ साल साउन २१ गते शुक्रबार, तदनुसार अगष्ट ६ तारीख ।
आज ‘गाईजात्रा’ पर्व विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर आरम्भ गरिँँदै
आज मिति २०७८ साल भदौ ७ गते सोमबार, अगष्ट २३ तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
चौथो विश्व संस्कृत दिवस
आज रक्षावन्धन, जनै पूर्णिमा (ऋषि तर्पणी) देशभर नव यज्ञोपवीत एवं रक्षावन्धन धारण गरेर मनाइँदै
आज मिति २०७८ साल भदौ ६ गते आइतबार, अगष्ट २२ तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
आज मिति २०७८ साल भदौ ५ गते शनिबार, अगष्ट २१ तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
आज मिति २०७८ साल भदौ ४ गते शुक्रबार , अगष्ट २० तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?